गाैतम बुद्ध विमानस्थलमा अब ५ महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ : महानिर्देशक क्षेत्री – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/गाैतम बुद्ध विमानस्थलमा अब ५ महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ : महानिर्देशक क्षेत्री
काठमाण्डाै – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अबको पाँच महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बताउनुभएको छ ।
आज बुधवारकाे कुराकानीका क्रममा महानिर्देशक क्षेत्रीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्राविधिक स्थितिको काम लगभग सकिसकेको बताउँदै अबको पाँच महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बताउनुभएको हो । उहाँले अबको एक महिनामा परीक्षण उडान गर्ने र त्यसबीचमा आफ्ना आन्तरिक गृहकार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।
महानिर्देशक क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘गौतम बुद्ध विमानस्थलको प्राविधिक स्थितिकाे सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौँ । अबको एक महिनाभित्र हामीले परीक्षण उडान गर्नेछाैँ । त्यसपछि जति नै ढिला गरे पनि अबकाे पाँच महिनामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन्छ ।
महानिर्देशक क्षेत्रीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भाैतिक पूर्वाधारकाे ८० प्रतिशत सकिएको बताउनुभयो ।
महानिर्देशक क्षेत्रीले कोरोनाका कारणले काममा केही असर गरे पनि काम नरोकिएको बताउनुभयो । ‘केही असर गरेको छ, केही काम रोकिएका छन् तर काम अब सुरु भइसकेको छ, केही ढिला मात्रै भएको हो’, उहाँले भन्नुभयाे ।
पोखरा विमानस्थलमा भैरहवा भन्दा राम्रो विमानस्थल बन्न लागेको र निकट भविष्यमै सञ्चालनमा आउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले निजगढ विमानस्थलको काम पनि सुरु भइसकेको र लगानीको जोहो कसरी गर्ने ? कुन मोडलमा गर्ने ? भन्ने निर्णय गरे प्राधिकरण तयार रहेको बताउनुभयो । महानिर्देशक क्षेत्रीले अहिले नेपालमा हरेक जिल्लामा विमानस्थल चाहिन्छ भन्ने कुरा विकास भएको भए पनि यो सम्भव नभएको बताउनुभयो ।